Tag: astaanta | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 4, 2020 Khamiis, Maarso 11, 2021 Douglas Karr
Waa maxay qiimaha astaanta? Weydii shirkad sida Nike oo kale waxaad dhihi kartaa malaayiin doolar - laakiin runtu waxay tahay, 1971, Nike waxay ku bixisay $ 35 astaanteeda. Maalmahan, heerka socda ee naqshadeynta astaanta xirfadeed wuxuu noqon karaa meel u dhexeysa $ 150 iyo $ 50,000. Waxaan dhawaan la shaqeynay macmiil ku qarash gareeyay $ 16,000 naqshadeynta astaanta kaliya si aan u helno markii ay sameeyeen Raadinta Sawirka Google ee warshadooda…
Axad, Janaayo 6, 2019 Khamiis, May 7, 2020 Douglas Karr
Mid ka mid ah aagagga aanan maalgashi ku sameysneyn ayaa ah boggan. In kasta oo wakaaladaydu lahayd astaan ​​weyn oo aan jeclahay, oo aan la shaqeyno dhammaan macaamiisheenna ku saabsan magacyadooda, haddana ma aanan haysan xarig ballaadhan oo aan kaga shaqeeyo Martech Zone sumadda… ilaa maanta. Astaantii hore ee "M" waxay asal ahaan ahayd waxyar oo wax laga beddelay sawir aan ku soo iibsaday si deg deg ah ka dib markii aan beddelay bogga. Waxay ahayd wax iska cad, mana matalin wax, iyo